Sunday January 16, 2022 - 16:11:36
Waxa muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf soo kala dhex galey xukuumadda maamulka la baxay Somaliland iyo axsaabta mucaaridka ah, khilaafkaas oo la xidhiidhay kadib markii Muuse Biixi uu ku dhawaaqey in ururro cusub la samaysan karo.
Muuse Biixi ayaa la sheegay in markii uu dareemay in aanu ku guuleysanaynin doorashada dambe in uu furey xeer dib loogu cusboonaysiinayo liisammada ururada. Xeerkaas oo la yidhaa xeer lambar 14/2011, kaas oo sheegaya in tobankii sanoba mar dib loo cusboonaysiiyo liisammada ururrada.
Arrintan ayaa ka cadhaysiisay axsaabta mucaaridka ah, iyaga oo meelo badan ka sheegay in haddii Muuse joojin waayo waxa ay ugu yeedheen muddo kororsi uu dalku dumi doono. Is qabqabsigaas ayaa keenay in xeerka furista ururrada loo gudbiyo maxkamadda sare ee maamulka Somaliland.
Haddaba maanta ayay maxkamaddu soo ansixisay xeerkii furista ururrada, waxaana laga baqayaa in xaalad amni ay ka soo cusboonaato maamulka haddii ay labada xisbi ee kale qaaddacaan xeerkan. Muuse Biixi ayaa ah jabhad hore oo ka tirsanaa ururkii SNM taas oo dadyawga qaarkood wax ka tabanayaan.
W/D Wadaad Yare Xaashi